Kordhinta Linux Mint 13 laga bilaabo Backports | Laga soo bilaabo Linux
Cusbooneysiinta Linux Mint 13 laga bilaabo Backports
Nooca 14 de Linux Mint ayaa la heli karay in muddo ah. Si kastaba ha noqotee, in kasta oo ay ku jirto dhowr ka fiican, Linux Mint 13 waxay leedahay 5 sano oo taageero ah sida Ubuntu 12.04 taasina maahan wax dad badani doonayaan inay lumiyaan. Marka su'aasha soo baxdaa waxay tahay: ma heli karaa isbedel ugu dambeeyay ee Mint 13, dembi u baahan tahay si loo rakibo ama xaqiiqda ilaa Mint 14?
Jawaabtu waa: dabcan !!
Tani waa tabarucaad ka yimid José Santiago Burgos, sidaas darteed wuxuu noqonayaa mid ka mid ah guuleystayaasha tartankeena toddobaadlaha ah:La wadaag wixii aad ka ogtahay Linux«. Hambalyo José!
Thanks to dadka ku jira Linux Mint, waxaa suurtagal ah in la helo kor u qaadista LM 14 iyada oo aan loo baahnayn noocaas. Waxyaabaha kale tani waxay siinaysaa Linux Mint 13 LTS isticmaaleyaasha marinnada xirmooyinka soo socda:
Qorfaha 1.6.7 (Gnome 3 / Shell fork)
MATE 1.4 (fargeeto Gnome 2)
Nemo 1.1.2. bedel Nautilus oo ah Maareeyaha Faylka
1.- Marka Linux Mint la rakibo, waxaan furay Cinnamon Menu.
2.- Liiska> Doorbidka> Ilaha softiweer. Waxaan galiyay lambarka sirta ah ee maamulka haddii loo baahdo.
3.- Markaad halkaa gaarto, guji ikhtiyaarka Xirmooyinka la soo sheegay (backports), sida ku cad sawirka. Kadib xir oo cusbooneysii bakhaarada.
4.- Waxaan furay Maareeyaha Cusboonaysiinta (markale, waxaan galiyay lambarka sirta ah haddii loo baahdo). Xulo dhammaan heerarka cusbooneysiinta 1 iyo 2, oo guji rakib.
Haddii wax sidan oo kale u muuqdaan, garaac OK. Waa fariin tilmaamaysa in baakado kale la rakibayo marka lagu daro cusboonaysiinta halkii se.
Markaad dhamayso, dib u bilaw kombuyuutarka oo ku dabakh isbedelada aan hoos ku dhigay. Talo, si kasta oo ay wax u dhacaan, ha joojin bakhaarada dib-u-celinta.
5.- Waxaan furay Synaptic (Liiska> Maamulka> Maareeyaha Xidhmada Snaptik). Waxaan galiyay lambarka sirta ah markii loo baahdo.
6.- Isbedelada si habsami leh ayey ku socdeen, laakiin xirmooyinka qaar wali waxay u baahan yihiin in laga saaro. Xulo xirmooyinka "nautilus", "nautilus-share", "nautilus-open-terminal" iyo kuwa kale oo ay ku jiraan "nautilus" magacooda (marka laga reebo "nautilus-data"). Dhib malahan haddii ay dhahdo in baakadaha kale ee meta-ka ah la baabiin doono, maadaama aad gadaal ka saari doontid.
Fadlan xir oo dib u fur Synaptic si dib loogu rakibo xirmooyinka lumay. Wax kastoo dhaca, ha damin Mint ama ma awoodi doontid inaad dib-ugu-gasho nidaamka barnaamijyo lumay awgood.
7.- Baarka raadinta, ku qor "mint-meta" waxayna ku tusi doontaa natiijooyinka aad ku aragtay shaashadda hoose. Hadda xulo "Mint-meta-codecs" (si loo rakibo koodhadh dhawaq hore loo tirtiray). Kadib guji "Apply" si aad u rakibtid.
Intaas, waxaa hadhsan oo keliya in dib loo bilaabo PC si loo adeegsado isbeddelada oo loo cusbooneysiiyo Mint 13 tan ugu dambeysay.
Casharka waxaa lagu sameeyay Cinnamon / Gnome isbedeladan waxay saameeyeen deegaankan (gaar ahaan Nautilus iyo Nemo). MATE ahaan waa ka fududdahay maadaama aad kaliya cusbooneysiin karto markii Backports la hawlgaliyo, iyada oo aan loo baahnayn in laga saaro xirmooyinka.
source: Barta Linux Mint
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Isticmaal FileLet » Cusbooneysiinta Linux Mint 13 laga bilaabo Backports
Faa'iido darrada ayaa ah maadaama ay ku saleysan tahay LTS, waxay ku sii hayn doontaa codsiyada leh nooc barafaysan bakhaarradooda, oo ay ku jiraan nooca kernel ...
Waxa ugu fiican ayaa ah inay marwalba u muuqan doonto muuqaal muuqaal ah maxaa yeelay waan cusbooneysiin doonaa qorfe waxayna u muuqataa inay u egtahay noocyada mustaqbalka ee Linux Mint
Jawaab Jamin Fernandez
Waan kugu raacsanahay adiga, sheyga walxaha wuxuu noqon karaa wax qasan laakiin hadii Ubuntu firida dhanka kor u socota lagu hayn karo 5ta sano ee ay weydiisato, waxaan u maleynayaa in Mint aysan noqon doonin mid aad u xun (iyadoo la tixgelinayo in Ubuntu WAA INAAD HAYSAA Kuwaas 5 sano kuwa u baahan), markaa haddii aan dhex marno xarkaha dhinac ama mid kale, waa inay banaanka u baxdo, marka, taasi maha wax laga walwalo
Hada hadaad ubaahantahay wax qaasatan nooca kernel-ka waxaad haysataa 2 ikhtiyaar: ama adigu adigu waad rakibtaa / uruurisaa kaligaa (waxaa jira casharro ay iniinyadu kujiraan .deb), laakiin waa inaad ku haysaa wax walba iyo khaladaadka jira marka laga reebo gacanta ku cusbooneysiin ama Miyaad rakibtaa barnaamij kaa caawiya (kiiskeyga waxaan ku rakibaa Jupiter maaraynta awoodda, taas oo ku jirta kernels-ka cusub ee horeyba u yimid asal ahaan)
Hagaag, xaqiiqda (kadib markaad lahadasho dadka Mint) waad joojin kartaa hadaadan mar dambe rabin cusbooneysiin dheeri ah oo aad iska ilaaliso xirmooyinka "aan xasilloonayn" (xigashooyinka maxaa yeelay waa xirmooyin leh noocyadii ugu dambeeyay ee Mint laakiin horeyba loogu tijaabiyay noocaas dhawaanahan aan dhibaato weyn qabin) laakiin maheli doontid fursad aad kuhesho astaamaha cusub ee noocyada cusubi soo bandhigi karaan mustaqbalka.
Shakhsi ahaan, haddii aad horeyba u hawlgalisay joornaalada dhabarka si aad u raadiso cusbooneysiinta halkan ku xusan, si fiican u daa in ay firfircoonaan si aad u sii wadato raadinta tan ugu cusub markii aad awoodid, in kasta oo ugu dambeyntii ay tahay go'aankaaga haddii aad sii wadato iyo in kale. Farxad
Emilio Jose Jimenez Flores dijo
Aad baad ugu mahadsantahay jawaabtaada, haddii ay xasiloonaato ka dib ku dheji mint 14
Jawaab Emilio Jose Jimenez Flores
Ku ciyaarida gitaarka Frets on Fire